कोभिड महामारी तत्काल अन्त्य हुँदैन : डब्लुएचओ – Nepal Press
निर्देशकले भने : ओमिक्रोनले केही गर्दैन भनेर हल्ला फैलाइयो
२०७८ माघ ५ गते १३:२९
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक डा. टेड्रोस गेब्रेससले कोभिड-१९ महामारी तत्काल अन्त्य नहुने बताएका छन् । नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै उनले ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोखिम उच्च रहेको भन्दै खेलाँची नगर्न आग्रह गरे ।
‘यो महामारी तत्काल अन्त्य हुने कुनै सम्भावना छैन’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालय जेनेभामा उनले भने ।
ओमिक्रोन ‘माइल्ड’ खालको भाइरस भनेर खेलाँची नगर्न उनले आग्रह गरे । गत नोेभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो ।
‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट अघिल्ला प्रजातिभन्दा निकै संक्रामक छ’ उनले भने, ‘तर, गम्भिर खतरा उत्पन्न गराउने सम्भावना चाहिँ छैन ।’ उच्च संख्यामा भाइरस संक्रमण हुँदा गम्भिर बिरामी र प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसलाई बिरामी बनाएको उनको भनाई छ ।
‘ओमिक्रोन संक्रामक छ । यसले हल्का लक्षण मात्र देखाउँछ भनेर गलत कुरा भनिएको छ । यसबाट सचेत हुनुपर्छ’ उनले भने । ‘गल्ती नगरौं । ओमिक्रोनले अस्पताल भर्ना हुने संख्या र मृत्यु बढाइरहेको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थालाई चुनौति दिइरहेको छ’ उनले भने ।
प्रकाशित: २०७८ माघ ५ गते १३:२९
क्वाड सम्मेलनबारे चीनले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै चीनसँगको विवादमा एन्थोनी अल्बानिजले के भने ?
क्यानडामा भीषण आँधी, ९ लाख घर विद्युतविहीन
रुसले फिनल्यान्डमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा रोक लगायो
अमेरिकामाथि रुसी प्रतिबन्धः ९३६ जनाको सूचीमा बाइडेन, ट्रम्प परेनन्
सुर्खेत जिससमा गठबन्धन र एमालेका प्रतिनिधि बराबर, माओवादीलाई फकाएर बहुमत पुर्‍याउने एमाले दाउ
४० स्थानीय तह जित्दै सुदूरपश्चिमको पहिलो पार्टी बन्यो कांग्रेस, कहाँ कसले जिते (सूचीसहित)
पोखराको १५ औं मेयरमा आचार्यको जित सुनिश्चित
तुलसीपुरमा १६०० मतान्तरसहित एमालेका खड्का अगाडि
तिलोत्तमामा कांग्रेसको अग्रता कायमै
स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ दलको अस्तित्व, कसले कति जिते ?